Dul-duleellada ka muuqda warbixinta hordhaca ah ee ay Dowladdu kasoo saartay qaraxii Xarunta Xamar | Hadalsame Media
Home Maqaallada Dul-duleellada ka muuqda warbixinta hordhaca ah ee ay Dowladdu kasoo saartay qaraxii...
Dul-duleellada ka muuqda warbixinta hordhaca ah ee ay Dowladdu kasoo saartay qaraxii Xarunta Xamar
(Hadalsame) 10 Agoosto 2019 – Natiijadii kasoo baxday Gudigii barayay qarixii Lagu halgay Masuuliyiintii goblka Waan akhriyay.
Anigoo aan dureyen waxaan kusoo gaabsanayaa ikhiyaartii qortay warqadda ka jawabeysay dhacdada ma ahayn kuwa ugu aqoonta badan ee wax baara.
Mana katurjumeyn ayaan is leeeyahay cilmiga iyo daba galka laanta Sidoonka Somalia.
Tusaale, baaruhu nalama wadaagin silsiladdii dhacdada, taariikhda fuliyaha, xariirka Xarunta Gobolka iyo qolada la tuhunsan yahay, shabakadda xariirisay, ma qarax fuliyihii un bay ahayd, ma jiraan dad tahunsanyahay IMW?!!
Waxaan u qaatay warbixin la qoray oo la ogaa waxa la qorayo. Marka ay timaado halbeegga dhacdooyinka lagu baaro kama dhex arag waxa loo yaqaanno baaris qoto dheer (Critical investigation methodology) waase dalkeena iyo xaaladiisa.
Waxaan ku baaqayaa in la tababaro dhallinyaro mustaqbalka ka jawaabi karta su’alaha dabagalka iyo ka hor tagga.
Waxaa Qoray: Axmed Kaboole
FG: Qoraalkani wuxuu ka tarjumaya aragtida qoraha ku saxiixan
Previous article”Wiilka yari waa haftey!” – Booliiska oo warbixin hordhac ah kasoo saaray geerida wiil Soomaali ah
Next articleIslamic finance taking shape in Ethiopia